के तपाइँको मोबाइलमा यी यापहरू छन्? तुरून्त डिलिट गर्नुहाेस् अन्यथा बैंक खाता खाली हुन सक्छ – www.agnijwala.com
के तपाइँको मोबाइलमा यी यापहरू छन्? तुरून्त डिलिट गर्नुहाेस् अन्यथा बैंक खाता खाली हुन सक्छ
पछिल्ला केही वर्षहरूमा अनलाइन लेनदेन द्रुत गतिमा वृद्धि भइरहेको छ। यहि समयमा, व्यक्तिहरू दैनिक लेनदेनको लागि गुगल वालेट, पेटीएम, फोनपे जस्ता मोबाइल वालेटहरू प्रयोग गर्न थालेका छन्।अर्काेतिर जहाँ यसले तपाईंको सुविधालाई बृद्धि गरेको छ। तर समय-समय साइबर अपराधले उनीहरू मार्फत मानिसहरूलाई आक्रमण गरिरहन्छ।
विगत केही वर्षमा अनलाइन लेनदेन द्रुत गतिमा बढेको छ। त्यहि समयमा, व्यक्तिहरू दैनिक लेनदेनको लागि गुगल वालेट, पेटीएम, फोनपे जस्ता मोबाइल वालेटहरू प्रयोग गर्न थालेका छन्। एकातिर जहाँ यसले तपाईंको सुविधालाई बृद्धि गरेको छ। तर समय-समय साइबर अपराधले उनीहरू मार्फत मानिसहरूलाई आक्रमण गरिरहन्छ। यस बाहेक, केहि त्यस्ता यापहरू छन् जसले तपाईंको वित्तीय लेनदेनलाई जोखिममा पार्दछ। यी पहिचान गर्न आवश्यक छ।
अनुसन्धान रिपोर्टका अनुसार यदि तपाईंले आफ्नो स्मार्टफोनमा केक VPN, Pacific VPN, eVPN, BeatPlayer, BeatPlayer, QR / بارकोड स्क्यानर MAX, eVPN, संगीत प्लेयर र टूलटिपनेटरलिब्रेरी यापहरू इनिष्टल गर्नुभएकाे छ भने यसले तपाईंलाई हानी गर्न सक्दछ। सुझाव यो छ कि तपाईं यसलाई हटाउनुहोस् वा सकेसम्म चाँडो स्मार्टफोनबाट हटाउनुहोस्। ह्याकरहरूले यी अनुप्रयोगहरू मार्फत तपाईंको बैंक विवरणहरू चोरी गर्न सक्दछन्।
यी सबै खराब यापहरू एन्ड्रोइड यापहरू हुन्। यसले प्रयोगकर्ताको स्मार्टफोनमा AlienBot Banker र MRAT स्थापना गर्दछ। AlienBot एक मालवेयर हो जुन वित्तीय यापहरूमा प्रवेश गर्न सक्दछ। यसले बैंकिंग विवरणहरूको चोरी निम्त्याउँछ। ह्याकरह रू यति चलाख हुन्छन् कि तिनीहरू सजिलै गुगललाई चट पार्न सक्छन्। यति मात्र नभै, तिनीहरू दुई-कारक प्रमाणीकरण कोड पनि सहजै तोड्न सक्छन्।